Top 10 Torohevitra ho an'ireo vao manomboka golf
Torohevitra ho an'ireo vao manomboka golf
Torohevitra ho an'ireo vao manomboka golf. Ireto ambany ireto misy sosokevitra vitsivitsy ho an'ireo vao vao mahatsiaro tena fa handeha ho any amin'ny tontolon'ny golf dia ho traikefa sarotra ary koa mitady torohevitra vitsivitsy aloha. Golf dia manana firaketana an-tsoratra noho ny maha-zavatra iray tamin'ny hetsika fanatanjahantena sangany, lalaovin'ny lehilahy matotra amin'ny loko maro karazana.
Na dia izany aza ny toe-javatra any amin'ny toerana sasany, golf dia nanjary nisafidy be kokoa ary misy.
Mety hampatahotra anao ny manomboka golf, miaraka amin'ny fahitan'ny mpilalao mahay kokoa maharitra maharitra ao an-tsainao. Ireo toro-hevitra ireo dia afaka manampy amin'ny fampitomboana ny fahatokisanao tena sy ny filalaovanao milalao amin'ny fotoana fohy.
Ny olona tsirairay dia mety ho maditra ka mandà tsy handray fanampiana na tari-dalana, mankafy ny manandrana ary manao azy io ho fomban'izy ireo ihany, ny torohevitra mahitsy tsy.
Miseho samirery, na eo aza ny boky fampianarana tena tsara, afaka mitarika anao hiditra ratsy (ary koa indraindray tsy azo ivalozana) fihetsika.
Ny pro golf tena tsara dia mety tsy maintsy mitondra anao hiverina amin'ny fototra, fa amin'ny maharitra, hisy tombony maharitra amin'ny lalao ataonao.
[Continue reading] about Top 10 Torohevitra ho an'ireo vao manomboka golf
5 Fitsipi-pitondrantena manan-danja
Driving Range EtiquetteMost of us speak about etiquette on the golf links, Fa ahoana ny amin'ny fomba fanao amin'ny fiara? Somehow it's more vital.Driving RangeYou are, kanefa, situated in closer quarters to your other golf enthusiasts … [Continue reading] about 5 Fitsipi-pitondrantena manan-danja
Correct Proper Golf SwingExactly how To Get The Proper Golf Swing That Suits You BestWithout developing a correct proper golf swing, possibilities are that you will never truly get to appreciate your golf game, not to mention reveal any … [Continue reading] about Proper Golf Swing
Custom DriversEvery golf enthusiast is different; the position, dimension, stance, and swing features will certainly vary from gamer to gamer, and also due to this a standard driver may match one player.Yet it may be as well short or as well … [Continue reading] about Custom Fit Drivers
Senior Golfers Strategies That WorkAs an senior golfers player, you want to stay on par with the more youthful players as well as keep your handicaps right where they are or far better.To do this you require to have a couple of pointers on the … [Continue reading] about Senior Golfers